Hamely mafy ny hatsiaka: 1°C Vakinankaratra, 4° C eto Analamanga - ewa.mg
News - Hamely mafy ny hatsiaka: 1°C Vakinankaratra, 4° C eto Analamanga
Misy anticyclone (tsioka atsimo) matanjaka mitondra rivotra mando ary mandrafitra ny toetry ny andro, mandritra ny faran’ny herinandro sy amin’ny fiandohan’ny herinandro vaovao.Hidina hatramin’ny 1°C any Vakinankaratra ary 4°C ho an’ny faritra Analamanga ny maripana farany ambany, manomboka rahampitso hatramin’ny alarobia ho avy izao, araka ny fanazavan’ny teknisianina, Randrianarison Rivo, eny Ampandrianomby, omaly. Hilatsaka 6 ka hatramin’ny 8°C amin’ny tokony ho izy, ao anatin’ny volana jolay tahaka izao ny maripana saika manerana ny Nosy. 14 ka hatramin’ny 16°C ny maripana ambony indrindra ho an’ny afovoan-tany. Ny taona 2013 no niseho farany ny fidinan’ny maripana tahaka izao satria hatrany amin’ny 2°C ny tany Vakinankaratra. Ny alakamisy ho avy izao vao hiakatra tsikelikely ny maripana ambany indrindra. Mila miomana amin’ny fepetra mifandraika amin’izany ny rehetra, indrindra ireo marefo ara-pahasalamana sy manana aretina mitaiza.
Hahazo orana ny tapany atsimon’ny Nosy, rahampitso sy ny alatsinainy, nikisaka aty amintsika ilay front avy any Afrika Atsimo mitondra hamandoana be. Ankoatra ny orana, mafimafy ny fitsokan’ny rivotra (55-65km isan’ora) saika amin’ny morontsiraka rehetra ka hampahery ny onjan-dranomasina. 3,5 ka hatramin’ny 6 metatra. Hanomboka anio hariva ary hitohy hatramin’ny talata ho avy izao izany tranga izany ka tokony ho mailo noho izany ny mpampiasa ranomasina rehetra, indrindra ireo sambo madinika. Tsy tokony hiandriaka intsony, araka ny toromariky ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly.
L’article Hamely mafy ny hatsiaka: 1°C Vakinankaratra, 4° C eto Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Tanora lahy sy vavy 53 nahazo fiofanana nandritra ny iray volana. Fiofanana momba ny fahaiza-mitarika, ny fampandrosoana ny maha olona, teny anglisy fototra ary informatika no nataon’izy ireo. Ao anatin’ny drafitr’asan’ny EFOI eo anivon’ny faritra, ity fampiofanana ELIT andiany faharoa ity, araka ny fanazavan’ny filohan’ny EFOI eto Madagasikara, Rakotondrainivonona Emilie. Tamin’ny alalan’ny fiarahamiasa teo amin’ny EFOI Maorisy sy ny famatsiam-bola avy amin’ny Accenture atsy Maorisy no nahafahana nanatantareka izany. Vehivavy mpandraharaha telo avy amin’ny ranomasimbe Indiana miisa telo no nampiofana ireto tanora malagasy ireto. Ny roa avy amin’ny EFOI Maorisy ka ny iray ary ny iray avy amin’ny EFOI eto Madagasikara. “Amin’ny fikambanan’ny vehivavy mpandraharaha eto amin’ny faritra ranomasimbe indiana ny EFOI dia renim-pianakaviana aloha ireo vehivavy mpikambana izay vao mpandraharaha ka manana andraikitra hanampy ireo tanora mba hatratra ny tanjony”, hoy ramatoa Rakotondrainivonona Emilie. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo mpiofana nandritra ny fizarana ny mari-pahaizana taorian’ny famaranana fiofanana fa nitera-bokatsoa ho azy ireo ity tetikasa ity satria tao no mbola tsy nikitika solosaina izany teo amin’ny androm-piainany kanefa ankehitriny mahay mikirakira izany. Tao ihany koa no nihatsara ny fahaizana miteny anglisy ary ny tena zava-dehibe dia nahazo fahalalana hampitomboana ny fahatokisan-tena izy ireo. Lynda A. Cet article EFOI MADAGASIKARA: Manohana ny tanora hahatratra ny tanjony est apparu en premier sur déliremadagascar.
Tenisy ambony latabatra: mbola misongadina ny ekipan’ny Aro
Tontosa tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny asabotsy 12 sy ny alahady 13 desambra lasa teo, ny fiadiana ny ho tompondakan’ny seksiona Antananarivo renivohitra, taranja tenisy ambony latabatra. Nisongadina ny ekipan’ny Aro, izay nandrombaka fandresena miisa 5 tamin’ireo sokajy 14 nifaninanana. Tsikaritra ho nisy fihenana ny lentan’ny fifaninanana sy ny haavo teknikan’ireo mpilalao noho ilay fihibohana lavareny. Na izany aza, samy nampiseho endri-dalao nahafinaritra avokoa ireo mpilalao 150 mianadahy mianaka. Nahatratra 11 ireo klioba niatrika ity fiadiana ny ho tompondakan’ny seksiona Antananarivo renivohitra ity. Nanohana ny fihaonana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny EMTT ary ny Cap Madagascar, izay samy avy any Frantsa ary ny Hospitec. Tapitra tamin’ity ihany koa ny taom-piasan-dRajosoa Charles Edouard sy ny ekipany, tsy hirotsaka hofidina intsony fa hanome sehatra indray ny hafa. Torcelin Toy izao ireo voka-dalao-Poussin : Aaron (Aro) 3 – 1 Davidy (Galaxy)-Poussine : Johanna (Aro) 3 – 1 Amboara (Aro)-Benjamin : Harry (Jovenna) 3 – 0 Andy (Jovenna)-Minime lehilahy : Riva (Acacia) 3 – 0 Ron (Jovenna)-Cadet : Loic (Aro) 3 – 2 Jonathan (Aro)-Cadette : Alexandra (Aro) 3 – 1 Rotsy (Galaxy)-Junior vehivavy : Rojo (Aro) 3 – 0 Mendrika (Aro)-Junior lehilahy : Luciano (Acacia) 3 – 0 Nicky (Acacia)-3è serie lehilahy : Riva (Acacia) 3 – 0 Tiana (Arics)-2è serie vehivavy : Rotsy (Galaxy) 3 – 0 Alexandra (Aro)-2è serie lehilahy : Narindra (Asa) 3 – 0 Dylan (Aro)-1è serie vehivavy : Santatra (Acacia) 3 – 1 Harena (Acacia)-1è serie lehilahy : Linoh (Jovenna) 3 – 2 Luciano (Acacia)-veteran : Gerald (Jovenna) 3 – 0 Jacquis (Ostie)L’article Tenisy ambony latabatra: mbola misongadina ny ekipan’ny Aro a été récupéré chez Newsmada.
“Buffet en famille” : hiaka-tsehatra ry Bekoto, Popoly…
Hafana indray ny faran’ny herinandro amin’ity … Be­koto, mpanakanto feno, manana ny maha izy azy eo amin’ ny mozika malagasy ny haneho ny talentany, rahampitso alahady 25 jolay, etsy amin’ny Karibotel Analakely, ma­nom­boka amin’ny 12 ora sy sasany. Tsy handeha irery anefa izy amin’izany fa hiaraka amin’i Mamy sy i Popoly, izay samy haneho ny talentany ihany koa. Nampitondraina ny lohahevitra “Buffet en famille” ity fampisehoana ity. Araka izany, natao ho an’ny fianakaviana ny fisakafoana rotsirotsin’ny seho ataon’ireo mpanakanto ireo. Hovazoina ao, ny hira anisan’ny nahafantarana an’i Bekoto, toy ny “Mofo tantely”, ny “Paiso ran-kena”, ny “Lendrema”, sns. Anisan’ny tena ahafantarana an’i Bekoto ny fisian’ny tarika Mahaleo. Tsy eo amin’ny hira sy ny famoronana ihany fa ny fahaizana mitendry zavamaneno maro ihany koa.Nanangona: HaRy RazafindrakotoL’article “Buffet en famille” : hiaka-tsehatra ry Bekoto, Popoly… a été récupéré chez Newsmada.
Minisiteran’ny Tontolo iainana: hazo voamboana 109 tratra teny amin’ny RN 2
Mitohy ny fampanarahan-dalàna sy ny ady amin’ny kolikoly eo amin’ny lafiny tontolo iainana, ataon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy (MEDD). Ao anatin’izany ny fisafoana tampoka teny amin’ny lalam-pirenena faharoa (RN 2), ny alahady 4 jolay teo. Tratran’ny ekipan’ny Fisafoana (service contrôle) tao anatin’ny kamiao lehibe (semi-remorque) iray ny hazo sarobidy voamboana miisa 109. Nogiazana avy hatrany ireo hazo ireo. Mandeha ny fanadihadiana lalina, hamantarana hatrany amin’ny tena tompon’ny hazo, ny toerana ny ala nikapana azy, sns.Araka ny Fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny varotra biby sy zavamaniry (Cites), voarara tanteraka ny fitrandrahana sy ny fanondranana any ivelany ny hazo sarobidy eto amintsika. Tafiditra ao anatin’izany ny voamboana, ny andramena, ny volombodimpoana (ébène), sns.Njaka A.L’article Minisiteran’ny Tontolo iainana: hazo voamboana 109 tratra teny amin’ny RN 2 a été récupéré chez Newsmada.
Nalevina eny Ambohi­ja­­naka ny pastora Rabenorolahy B.
Notanterahina avy hatrany, omaly, ny fandevenana ny filoha teo aloha ny FLM, ny Dr Rabenorolahy Benjamin. Ta­paky ny eo anivon’ity fiangonana ity sy ny fianakaviany izany. Voahaja rahateo koa ny fepetra amin’ny tsy tokony hivoahan’ny razana eto amin’ny faritra Analamanga. Tsiahivina fa nifanesy ny fahalasanan’ireo mpitantana ny FLM ary samy lavon’ny valanaretina Coronavirus avokoa izy ireo. Anisan’izany ny filoha am-perinasa, ny Rev. Rakotonirina David, nodimandry ny asabotsy alina teo. Na­levina etsy amin’ny fasan’ny misionera etsy amin’ny FLM Ambatovinaky ny alahady teo. Izao indray koa ity fodimandrin’ny filoha teo aloha eo anivon’ny fiangonana ity. Efa samy nampahery sy nampionona ny FLM avokoa ireo eo anivon’ny fiangonana ao amin’ny FFKM amin’izao fahoriana roa sosona izao. Anisan’izany ny eo anivon’ny anglikanina (EEM), ny fiangonana katolika (Ekar) ary ny ao amin’ny FJKM.Synèse R.L’article Nalevina eny Ambohi­ja­­naka ny pastora Rabenorolahy B. a été récupéré chez Newsmada.
Mety handrahona ny alahady sy alatsinainin’ny Paska
Tsy hisy ny rotsak’orana mandritra ny faran’ny herinandron’ ny Paska. Raha ny tombantomban’ny eny anivon’ny Sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia handrahona avokoa ny andro eto Antananarivo, amin’ny alahady sy ny alatsinainin’ny Paska. Hahazo orana kosa ny morontsiraka Atsinanana sy ny faritra Avaratra mandritra ireo fotoana ireo. Hidina kosa ny mari-pàna, indrindra ny eto afovoan- tany. Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fararano mamarana ny fotoam-pahavaratra i Madagasikara amin’izao fotoana izao ka mbola hitohy ny rotsak’orana. Ao anatin’izao fialan-tsasatra izao dia mila mitandrina ireo mpampiasa lalana rehefa misy ny zavona, indrindra ireo mandeha eny amin’ny lala-mikodana sy ny eny amin’ ny lalam-pirenena. Tsy mahita lavitra ny mpamily rehefa misy ny zavona ka mety hiteraka lozam-pifamoivoizana. Mba hisorohana izany dia tsara ny mandrehitra ny jiro voatokana ho an’ny zavona na maraina na antoandro na alina, raha ny fampitandreman’ny avy eo amin’ny sampana mpamantatra ny toetrandro. L’article Mety handrahona ny alahady sy alatsinainin’ny Paska est apparu en premier sur AoRaha.